के हाम्रै छोरा छोरी विश्वकै उत्तम आविष्कारक, उद्योगपति,नेता अथवा नेत्री बन्न सक्दैनन् र ? - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७७ असोज ७ गते ९:५३ मा प्रकाशित
के हाम्रै छोरा छोरी विश्वकै उत्तम आविष्कारक, उद्योगपति, नेता अथवा नेत्री बन्न सक्दैनन् र?
अमेरिकामा बस्ने सबै स्कुल जाने उमेरका बिध्यार्थीहरुलाई इनोभेसन (INNOVATION) नेतृत्व (LEADERSHIP) र व्यवसाय (ENTERPRENEURSHIP) मा उत्प्रेरित गर्नको लागी हामीले DREAM BIG CHALLENGE प्रतियोगिता आयोजना गर्दै छौँ। हाम्रै छोरा छोरी हरुमा लुकेको प्रतिभा उजागर गर्न प्रेरित गर्नुहोस्। यो दसैँ र तिहारमा सम्पन्न गर्ने गरी गर्न लागिएको यो कार्यक्रम विश्व भरिका नेपाली हरुले हेर्नु हुने छ। यो अवसरको उपयोग गर्नु हुन् अनुरोध छ। यसको लागी आवेदन दिनको लागि तलको लिङ्क मा CLICK गर्नु होला। विस्तृत सूचना हजुरहरूलाई इमेल मार्फत पठाइने छ।